Midowga Musharaxiinta ayaa dalab xasaasi ah u gudbinaya Rooble kadib la wareegida doorashada iyo amniga - Axadle – Axadle
Midowga Musharaxiinta ayaa dalab xasaasi ah u gudbinaya Rooble kadib la wareegida doorashada iyo amniga – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Golaha Musharaxiinta ayaa soo dhoweeyay go’aankii Baarlamaanka Soomaaliya ee ay uga laabteen muddo kordhintii uu u sameeyay Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed C / llaahi Farmaajo.
“Golaha Wakiiladu wuxuu soo dhaweynayaa go’aanka dib uga noqoshada muddo kordhinta kuna soo noqday heshiiskii Sebtember 17. ayaa yiri.
Ururka Musharaxiinta ayaa sidoo kale soo dhoweeyay in Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu si buuxda ula wareegay gacan ku haynta howlaha doorashada dalka iyo amniga.
“Goluhu wuxuu kaloo soo dhaweynayaa magacaabista ku simaha Ra’iisul Wasaaraha Mudane Maxamed Xuseen Rooble si uu si buuxda ula wareego gacan ku haynta doorashooyinka qaranka iyo amniga dalka,” ayaa lagu yiri midowga musharixiinta.
Ururka Musharixiinta ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan R / wasaare Rooble sidii loo qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah sida ugu dhaqsiyaha badan.
“Goluhu wuxuu diyaar u yahay inuu si buuxda ula shaqeeyo Ra’iisul Wasaaraha si loo qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah mustaqbalka dhow, waxayna diyaar u yihiin inay ka qeybgalaan kulan talo bixin ah oo lagu soo bandhigayo walaaca laga qabo dhaqan gelinta heshiiska. Bishii Sebtember.”
Goluhu waxay ugu baaqeen ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuu dhex-dhexaad ka noqdo arrimaha doorashada oo uusan garab istaagin mid ka mid ah dhinacyada ku loolamaya doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya.
Dhanka kale midowga musharixiinta madaxweynaha waxay ugu baaqeen xukuumada talada haysa inay magacowdo hogaan mideyn kara ciidamada dowlada federaalka ah ee Soomaaliya, iyagoo ku sababeeyay kala aragti duwanaanshaha mucaaradka iyo difaaca muddo kordhinta madaxweyne Farmaajo ee baarlamaanka.
Maaddaama ay ciidanka qaranku ku kala qaybsan yihiin diidmada iyo difaaca muddo kordhinta sharci darrada ah, Goluhu wuxuu ku talinayaa in dawladdu ay magacawdo hoggaan mideyn kara ciidanka oo ka dhex dhisi kara kalsooni ay ku mideeyaan ciidanka. Goluhu wuxuu ka digayaa in milatariga oo diiday in waqtiga loo kordhiyo xafiiska ay ka aargoosan doonaan, xuquuqdooda diidi doonaan ama khalkhal gelin doonaan maamulka amniga, si toos ah ama si dadban, madaxweynihii hore iyo xulafadiisa. “Goluhu wuxuu ugu baaqayaa Ra’iisul Wasaare Rooble inuu qaado tillaabooyin uu ku muujinayo madaxbanaanida dalka, si uu u kasbado kalsoonida militariga, siyaasiyiinta, shacabka iyo beesha caalamka” ayaa lagu yiri qoraalka.
Hoos ka aqriso bayaanka ka soo baxay midowga musharixiinta
ISKU-DHAF: Shaxda Isku Darka Ah Ee Kulanka Man United vs Liverpool &
Ronaldo’s hat trick for Actual Madrid towards Atletico 2017